ကန်ပျူတာ တပ်ဆင်အသုံးပြုနည်း (မြန်မာ)
ဟိုးအရင်ကတော့ တင်ထားပေးပြီးသားပဲ ထင်တယ် . ဒါပေမယ့် link သေနေလောက်ပြီ ထင်လို့ အသစ်ပြန်ပြီးတော့ တင်ပေးလိုက်ပါတယ် . ကိုမျိုးသူရ ရေးထားတဲ့ စာအုပ်ကလေးပါ။ အဆင်ပြေပါစေလို့ ဆုတောင်း ပေးလိုက်ပါတယ် . လိုချင်တဲ့သူများ အောက်မှာ Download လုပ်လိုက်ပါ။